အမေးအဖြေများ -, Ltd. SYM အီလက်ထရောနစ်ကုမ္ပဏီ
SATA Cable ကို
D-SUB Cable ကို
Ethernet cable ကို
flat ဖဲကြိုး Cable ကို
ဖျူး Holder ကကြိုး
Servo cable ကို
မြင်းခြေလှမ်းကကြိုး Wiring အခြားသူများက
ထောင့်ကွက် header ကို
အမျိုးသမီး pin ကို header ကို
IDC မှ connector ကို
အခြားသူများက connector ကို
PH သည် 2.0 စီးရီး
Power က terminal ကို
သင်နမူနာလိုအပ်လျှင်, ငါတို့သည်အခမဲ့ခြင်းဖြင့်သင်နမူနာပေးပို့နိုင်ပါတယ် (အမြိုးမြိုးနဲ့နမူနာများအရည်အတွက်ပေါ်မူတည်) သို့မဟုတ်သင်နမူနာကုန်ကျစရိတ်များအတွက်ပေးဆောင်နိုင်ပါ။
သင်နမူနာတာဝန်ခံများအတွက်ပေးဆောင်ကျနော်တို့တစ်ဦးချင်းစီကတခြားအတူဆွဲအတည်ပြုပြီးနောက်နမူနာ 1-5 နေ့ရက်ကာလအဘို့အဆင်သင့်ဖြစ်လိမ့်မည်။
နမူနာအမိန့်ပေးပို့ဘို့ 4-5 အလုပ်ရက်ပေါင်းကြာမြင့်မည်ဖြစ်သော UPS / DHL / FedEx အားဖြင့်တင်ပို့ပါလိမ့်မည်။ သငျသညျအကောင့်တစ်ခုရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးလျှင်သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဆက်သားအကောင့်ကိုအသုံးသို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကို prepay နိုင်ပါတယ်။
သငျသညျကြှနျုပျတို့အတှကျ OEM / လိမ္မော်ရောင်ပွုနိုငျသနညျး
ဟုတ်ပါတယ်။ ကြှနျုပျတို့ဝါယာကြိုးကြိုး, cable ကိုပရိသတျမြားနှငျ့ PCB connectors အပေါ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူ, OEM သို့မဟုတ်လိမ္မော်ရောင်အတှေ့အကွုံထက်ပိုမို 12 နှစ်နှင့်အတူစက်ရုံဖြစ်ကြောင်း, နွေးနွေးထွေးထွေးကြိုဆို OEM နှင့်လိမ္မော်ရောင်အမိန့်ရှိပါတယ်။
ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ဒါဟာအမိန့်အရေအတွက်နှင့်သင်အမိန့်နေရာရာသီပေါ်တွင်မူတည်သည်။ MOQ ၏ခဲအချိန်အကြောင်းကို5မှ 15 ရက်အတွင်းဖြစ်ပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်အဆိုပါကုန်စည်အားလုံး4ရက်သတ္တပတ်အတွင်းကိုလက်စသတ်နိုင်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ကိုသင်အရှိဆုံးအဆင်ပြေသို့မဟုတ်အများဆုံးကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောသင်တို့အဘို့ဖြစ်သည့်တဦးတည်းရွေးချယ်နိုင်သည်စသည်တို့ကို EXW, FOB, CIF, ကိုလက်ခံကြသည် .
ဝါယာကြိုး: (များသောအားဖြင့်ကြေးနီသို့မဟုတ်လူမီနီယံနဲ့လုပ်ထားတဲ့) တစ်ဦးကတစ်ခုတည်းစပယ်ယာ။ ဝါယာကြိုးအနိမ့်ခုခံရေး, အနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်နှင့် "gauge" ဖြင့်တိုင်းတာကြသည်။ အဆိုပါသေးငယ်သည့် gauge, အထူ wire ကို။ wire ကိုအဆိုပါထူတစ်ဦးကိုမီးရှို့ဖျူးကနေရရှိလာတဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများ၏အန္တရာယ်မြင့်မား။
cable: တစ်ခုတည်းဂျာကင်အင်္ကျီအတွင်းထုပ်နှစ်ဦးသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုကာကွယ်။ အများစုမှာကြိုးတွေလျှပ်စစ်လက်ရှိ, လျှပ်စစ်ကွင်းဆက်များနှင့်မြေပြင်ဝါယာကြိုးပြီးဆုံးကြောင်းကြားနေဝါယာကြိုးသယ်ဆောင်တဲ့အပြုသဘောဝါယာကြိုးများ၏ရှိရေး။
ဝါယာကြိုးကြိုးသို့မဟုတ် cable ကိုပရိသစိတ်ကြိုက်ဘယ်လိုနေသလဲ?
ဖောက်သည်စိတ်ကြိုက်များအတွက်အများကြီးအထောက်အကူဖြစ်စေပါလိမ့်မည်သည့်ရည်ညွှန်းများအတွက်အမှန်တကယ်ဓါတ်ပုံများနှင့်ဆက်စပ်ရေးဆွဲထောက်ပံ့နိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်ရုံအဖွဲ့အတူတကွဖောက်သည် '' အဖွဲ့နှင့်အတူညှိနှိုင်းပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုန်ကြမ်းအများစုဟာသင် (စသည်တို့ကို ... က ISO 9001, ISO ကို 14001 ကိုလှမျး) သင့်စည်းမျဉ်းများလိုက်နာမှုအန္တရာယ်များကိုလျှော့ချပေးနိုင်ဖြစ်ကြောင်းအဓိပ္ပာယ်မကြာခဏလက်ရှိစည်းမျဉ်းများနှင့်အတူ lready လိုက်နာများမှာ
သငျသညျငါရောနှောနေခြင်းသို့မဟုတ်လုပ်ဖို့ပါဝင်ပစ္စည်းများ / ကုန်ကြမ်း privde သလား?
ဒါဟာသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သီးခြားလိုအပ်ချက်များပေါ်တွင်မူတည်သည်။ အချို့ကုမ္ပဏီတွေကအခြားသူများပါဝင်ပစ္စည်းများသူတို့ကိုယ်သူတို့ပေးရွေးချယ်ပါဝင်ပစ္စည်းများ / ကုန်ကြမ်းဝယ်ယူမှုအပါအဝင်, ဓာတုပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ခြင်း၏ပြီးပြည့်စုံသောလုပ်ငန်းစဉ်ကို outsource ရန်အလိုရှိ၏။ A ကောင်းဆုံးသေဆုံးသူထုတ်လုပ်သူသင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ရန်လုပ်ဆောင်နေ၎င်း၏လမ်းချမှတ်။
ကြမ်းပြင် 2, အဆင့်မြင့်နည်းပညာစက်မှုဇုန်ပန်းခြံ, shayi ရွာ, မြို့ shajing, baoan ခရိုင်, Shenzhen မြို့, Guangdong ပြည်နယ် changxing,5တည်ဆောက်ခြင်း